Mazano mashanu ekuwedzera Vhidhiyo Yako Yekushambadza Shanduko Matengo | Martech Zone
Ingave yekutanga kana yepakati bhizinesi, vese vemabhizinesi vanotarisira kushandisa nzira dzekushambadzira dzedhijitari kuti vawedzere kutengesa kwavo. Kushambadzira kwedhijitari kunosanganisira kutsvaga injini optimization, social media kushambadzira, email kushambadzira, nezvimwe.
Kuwana vangangove vatengi uye kuve nekushanya kwakanyanya kwevatengi pazuva zvinoenderana nekuti unoshambadza sei zvigadzirwa zvako uye kuti zviri kushambadzwa sei. Kushambadzirwa kwezvigadzirwa zvako kuri muchikamu chesocial media kushambadzira. Iwe unoita zviitiko zvakasiyana sekutumira mifananidzo uye zvinyorwa, kurodha vhidhiyo, uye kuwedzera zvekugadzira zvemukati kutyaira kubatanidzwa kwevateereri.
Pakati pemazano ese aya, kuva mavhidhiyo kushambadza shanda zvakanyanya kutengesa zvigadzirwa uye kusvika kune vakawanda vateereri. Saka, kushambadzira kwevhidhiyo chishandiso chine simba pamhepo chinotengesa masevhisi uye chinovaka mhando yako.
Muna 2021, kushandiswa kwekushandisa mavhidhiyo ekushambadza kuUnited States kwaifungidzirwa kusvika 55.34 bhiriyoni emadhora ekuAmerica uye kwaifungidzira kuti kushandiswa kwaizokwira kusvika 78.5 bhiriyoni mukupera kwa2023. Yese yedhijitari inoshandiswa pakushambadzira muUS yaitarisirwa kuwedzera kubva pa191 kusvika pa250. mabhiriyoni emadhora ekuAmerica panguva imwe chete.
Zvakare, kuita kuti nzira dzako dzekushambadzira dziwedzere kunakidza, isa mari muvhidhiyo animation. Mavhidhiyo ane animated anokwezva vashandisi 'kutarisisa dhiraivha tarisiro yekushandura. Kugadzira vhidhiyo inonakidza kunogona kuve kwakaoma saka ungangoda kushandisa vhidhiyo kugadzira uye sevhisi yeanopopayiti kubatsira.
Chii chinonzi Vhidhiyo Ads?
Kushambadza kwevhidhiyo yepamhepo kana kushambadzira kwevhidhiyo parizvino ndiyo inonyanya kushanda yepamhepo ad medium. Iyo yekusimudzira yemukati pasocial media mapuratifomu inotamba isati yasvika, panguva, kana mushure mekushambadzira zvemukati. Dzimwe nyanzvi dzekushambadzira midhiya dzinorebesa tsananguro yekushambadzira yevhidhiyo kuti ibatanidze kushambadza zvine zvemukati zvevhidhiyo, senge izvo zvinotanga kutamba vhidhiyo kana munhu akaisa chitubu chegonzo pamusoro pavo uye mavhidhiyo emunharaunda anosimudzirwa padhijitari ad network.
Heino muenzaniso wepfupi vhidhiyo ad yatakagadzira:
Hapana mubvunzo kuti kushambadza kwevhidhiyo ndiyo imwe yedzakanyanya kufarirwa nzira dzekusimudzira bhizinesi rako uye kusvika kune vateereri vepamhepo. Nyanzvi dzinotarisira uye dzinotenda kuti vhidhiyo ads ichatonga iyo makore gumi anotevera, zvichiratidza kuti ikozvino inguva yakakodzera yevashambadziri vekushambadzira kuti vawedzere ruzivo rwavo munharaunda iyi. Zvakare, ivo vanofanirwa kuongorora nzira yekuvandudza kusvika kwavo uye nekubudirira kwese neakasiyana mishandirapamwe.
Kubva pakuwedzera misoro yenyaya kusvika pakubatanidza mifananidzo ine simba, heano mashanu akanakisa evhidhiyo ads matipi ayo anosimudzira ako ekushandura mitengo kuburikidza nevhidhiyo kushambadzira.
Mazano ekutevera Paunenge Uchiwedzera Vhidhiyo Ads
Kushambadzira kunoshanda kwevhidhiyo uye mwero wepamusoro wekushandura, heano mamwe matipi uye matipi mukugadzira maitiro ekufunga. Shambadziro yako inofanirwa kunge iri kuratidza dambudziko rinogona kugadziriswa nekambani yako kana mhando, shandisa yakanaka script yechirongwa chevhidhiyo, uye sarudza chikuva chakakodzera. Heano matipi mashanu evhidhiyo ads anounza shanduko.
Ita kuti Vhidhiyo Yako Yekushambadza ive Yekutanga Inonakidza uye Simbisa Chiratidzo Chako
Kuwana iyo pfungwa yevhidhiyo ad yako haina kukwana kuunza shanduko nekuti kutanga kwevhidhiyo yako kwakakosha. Kana iwe usingade kuti vataridzi vasvetuke kushambadza kana kudzvanya kure, iwe unofanirwa kuteerera kune kutanga kweshambadzo kuti uone masekonzi mashoma ekutanga uye kuverenga.
Kuti ubatanidze vateereri vako, ita nhamburiko uye tanga vhidhiyo yako nekutaura kunokwezva nekugadzirisa mamwe matambudziko akajairika, kubvunza mubvunzo wakakodzera, kana kuwedzera chimwe chinhu chinonakidza chinoita kuti brand yako ibude pachena.
Vese varidzi vebhizinesi vanoda kuti vatengi vaone ads pakupedzisira; kana vakaisiya mukati menguva, kune mikana mishoma yekuti kutengesa kwako kusimudze. Saka, tanga mavhidhiyo ako ads ane makuru ekuona, uye sanganisira chaiyo mifananidzo uye yakajeka mavara.
Ita shuwa kuti mhando yakajekeswa uye inogona kumutsa kufarira kwevatengi nekukurumidza. Nechinangwa ichi, iwe unofanirwa kuudza vatengi kuti nei mhando yako yakanaka uye kuti masevhisi ako anopa sei mabhenefiti. Vanhu vanotarisira zvese kubva kumhando yechigadzirwa kuenda kurutsigiro rwevatengi, saka ad yako inofanirwa kusimbisa nei kambani yako yakasiyana uye yakavimbika.
Humbowo hweSocial Hunokosha muVhidhiyo Ads
Rimwe zano rekutarisa paunenge uchiita kugadzirwa kwevhidhiyo chiratidzo chemagariro. Icho chinhu chinowanzo furatirwa chesocial media advertising. Sezvo isu tichiziva kuti kune makwikwi akawanda munyika yedhijitari, saka iwe unofanirwa kuenda pamusoro nekupfuura kukwezva vatengi vako kuti uri kupa online mhando masevhisi avanogona kuvimba nawo. Zvakadaro, hazvisi nyore kumhanya munzvimbo imwechete nevakwikwidzi vasingaverengeki.
Vese varidzi vebhizinesi vanofanirwa kushandisa izvi video production mazano ekuona mhando yavo ichisvika pamazinga epamusoro. Muchiitiko ichi, kuvaka chivimbo kunofanira kuva chinhu chekutanga. Pasina chinhu ichi, zvichave zvakaoma kutenda zvauri kutaura kune vateereri vako.
Vanogona kuve nekusahadzika, kunyanya kana iri yepamusoro-ye-ye-funnel mushandirapamwe pauri kusangana nevanhu vasina kumboona brand yako. Saka, kupinza humbowo hwemagariro mukushambadzira kwevhidhiyo, unogona kushandisa zvipupuriro, wongororo, mabheji enyeredzi, uye zvemukati-zvinogadzirwa nemushandisi.
Zvipupuriro zvinobatsira kubvisa mazwi kubva mumuromo memutengi wako uye wozogovera mhinduro nenyika. Ongororo kana mhinduro dzevatengi dzinotsanangura chiitiko chese uye kuti masevhisi ako akabatsira sei vatengi. Kupfuurirazve, izvi zvipupuriro zvinobatsira vatengi vatsva mukuvimba nemhando yako.
Kushandisa-zvinogadzirwa nemushandisi kunopa tarisiro yako nevatengi vari kunakidzwa nezvigadzirwa kana masevhisi ako. Izvi zvinoshanda zvakanaka pakati pemafunnel campaigns uye inoshandura vangangove vatengi pafenzi.
Shandisa Yakavanzika Indasitiri Yekushambadza
Kana iwe wapedza nepfungwa yekugadzira uye kutanga kweshambadziro, iwe wakanaka kubata kutarisisa kwevashandisi. Asi, zvakadini nezvekutengesa uye kutendeuka chiyero? Izvo zvakakosha kutyaira kutengesa uye kuwana mamwe mabhatani pasina kushandisa maawa akati wandei.
Imi mese munofanirwa kugadzira ma ads ekutengesa zvakanyanya. Pane imwe nzira iyo vanyori vekushambadzira vakavimba nayo kwemakore mazhinji kushandura tarisiro mukubhadhara vatengi nguva dzose. Formula yacho inonzi AIDA, iyo inomirira kutarisa, kufarira, chido, uye chiito. Unogona kushandisa iyi fomula kugadzira zvinyorwa zvevhidhiyo uye kuwana mamwe mabhatani otomatiki pasina kuisa maawa uchirovera musoro wako kumadziro.
Paunenge uchiita vhidhiyo kugadzira, ingave yenguva dzose vhidhiyo kana animation, iwe unofanirwa kubata tarisiro yetarisiro, chengetedza kufarira, kuvaka chido chezvigadzirwa uye wobva wavasundidzira kuti vaite. Aya matanho anovimbisa kuti ads anoramba akakodzera, achiita, uye anoshandura-yakatarisana.
Nguva Yekushambadza Vhidhiyo Yako
Vanhu vazhinji vanoona kushambadza kana vakazviona zvichinakidza asi svetuka nekukurumidza kana ad ikatora nguva refu. Saka, dzivisa kushandura kukunda kwako kuita documentary. Chengetedza vhidhiyo ads ipfupi uye inotapira nekuti mazhinji epamhepo vhidhiyo ads masekonzi makumi matatu kana pasi.
Paunenge uchigadzira vhidhiyo, chengeta iyi yakaringana kureba mupfungwa dzako paunenge uchigadzira iyo script yevhidhiyo. Nekudaro, mavhidhiyo akareba anoshanda zvakare, kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge rwuri rwechinzvimbo. Semuenzaniso, kana iwe uchitsanangura chiitiko kana nyaya nezve brand yako iyo ine mutengi kana mumiriri wekambani, vhidhiyo refu yakanakira.
Chero nzira, zvakafanira kusiya zvisina basa uye zvisingakoshi zvemukati. Zvakare, edza kuparadzira meseji yako nekukurumidza sezvinobvira kuti vataridzi varambe vachiona uye kubatikana. Hurefu hwekushambadzira kwevhidhiyo yako hunofanirwa kuve nechokwadi chekuti vatengi havaiwane isingaite uye isingafadzi.
Wedzera Call to Action
Ingave vhidhiyo yako kana chinyorwa chinowedzera kufona kuchiito chine basa rakakura mukuudza vanhu zvekuita. Kushandisa call to action (CTA) kunoita kuti vanhu vafemerwe nezviri mukati uye zvinovabatsira kusarudza kana zvakanaka kutenga chigadzirwa.
Kushevedzera kuita chimwe chinhu kunogona kuve chirevo kana mazwi mashoma anobatsira vashandisi kuita zvinotevera kana vaona ad kana kuverenga chinyorwa chakazara.
Uyezve, chinangwa chekushambadzira kwese kwevhidhiyo kukurudzira vateereri kuita chimwe chinhu. Kudaidzira kuita (CTA) kunogona kutorwa mifananidzo kana kuwedzerwa kuburikidza nemavara uye magiraidhi.
Sezvineiwo, zvakanakisa kushandisa kufona kuita chiito pakupera kwevhidhiyo. Semuenzaniso, kuratidza vatengi vako, vanogona kushanyira peji rako kana webhusaiti kuti uwane rumwe ruzivo, kusaina kuderedzwa uye zvibvumirano, kana kutenga zvigadzirwa nemasevhisi.
Kushambadza kwevhidhiyo kwave chishandiso chakasimba kwazvo chinoita kuti vatengi vako vabatane nemhando yako. Nezviri kutaurwa, kugadzira mavhidhiyo ekugadzira, mapfupi, uye anonakidza kwakakosha. Vanhu havaone zvese zvaunotumira pasocial media mapuratifomu, ivo vanosefa kunze zvinonyanya kuita zvemukati, uye kana zvasvika kune ads, ivo vanosarudza zvinonyanya kufadza. Kubudirira kwekushambadzira kwevhidhiyo kunoita kuti urambe uchiwana vatengi, kuwedzera kutengesa uye kuzivikanwa kwemhando. Naizvozvo, kushambadza kwevhidhiyo kunofanirwa kuitwa mushure mekufunga matipi anokurukurwa muchinyorwa.
Tags: kutoraad kutendeuka ratekushambadza indasitiriakabatsiramuchisoconversion ratekutendeukawedzera ad shandukokureba kwevhidhiyopakati pemupenderorocket kufambamumagariro uchapupuUchapupuugcuser-generated contentmavhidhiyo kushambadzavhidhiyo kushambadziravideo productionvhidhiyo nguva